पत्नी दीपा बिरामी भएपछि अस्पतालमा नै दीपाको जन्मदिन मनाए गायक प्रमोद खरेलले – Sandesh Munch
पत्नी दीपा बिरामी भएपछि अस्पतालमा नै दीपाको जन्मदिन मनाए गायक प्रमोद खरेलले
June 29, 2020 303
काठमाडौं । लोकप्रिय गायक प्रमोद खरेलको घरमा लक्ष्मीको आगमन भएपनि उनी अस्पतालको दौडधुपमा भने लागिरहनु परेको छ ।
आज पत्निको जन्मदिनका दिन पनि गायक खरेल अस्पतालमा नै छन् । उनले पत्नि दीपालाई अस्पतालमा नै जन्मदिनको शुभकामना दिए ।
असार ३ गते छोरीका बाबु बनेका प्रमोदकी पत्नि दीपाको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उनको अस्पतालको बास भएको हो । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत छोरी जन्मेपछि अस्पतालमा भएका कुराहरु खोलेका छन् ।
असार १५ , उनको जन्मदिन, तर…
…सधै जस्तो छैन यो असार १५ ,उनी CCU मा छिन्।
नियतीले यसपाली अस्पतालको CCU कक्षबाटै उनको जन्मदिन मनाउदैछौं ।स्वास प्रस्वास समस्या भएपछि छोरी जन्मेर सिधै NICU गइन्। जन्मेको ६ दिन पछि मात्र NICU बाट छोरी लाइ निकालेर भेट्न पाएकी उनी आफै फेरि १२ औं दिनमा CCU पुगिन । सुत्केरी अवस्थामा हुने घातक postpartum cardiomyopathy ले आक्रमण गरेपछि मुटुको मुटुले राम्रो काम गर्न नसकेर इमरजेंसी अल्का हुदै मनमोहन मुटु अस्पतालमा गम्भिर अवस्था मा पुगिन। तर अहिले धेरै सुधार छ । उता घरमा आज १९ औं दिन सम्मै इन्जेक्शन पम्प र नर्सको साथमा छोरी युद्ध जित्दैछिन। आज सॉझ डिस्चार्ज भइन भने जम्मा ३ दिन मात्र भेट भएका आमा छोरी को पुनर्मिलन हुनेछ। उपचारमा संलग्न डाक्टर नर्स प्रति नमन छ।
आधा त्रास र आधा आशको समय पार गर्दै यो कठिन मोड़मा CCU मै उनलाइ जन्मदिनको अनगिन्ती अनगिन्ती शुभकामना, My bravo अब चॉडै ठिक हुनेछौ … प्रार्थना अनि कामना।
आज श्री शाके १९४२ बि.स.२०७७ साल असार १५ गते सोमबार इश्वी सन २०२० जुन २९ तारीख आषाढ शुक्लपक्ष नवमी तिथी हस्ता नक्षत्र पश्चात चित्रा नक्षत्र परीघ योग वालव करण चन्द्रंमा कन्या राशिमा आनन्दादि योगमा वज्र योग प्रमादीनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु राष्ट्रिय धान दिवस, रोपाइँ महोत्सव ,दहीचिउरा खाने दिवस (ज्यो.प.सरोज घिमिरे)
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) पारीवारिक झोर झमेलाको सामना गर्नु पर्नेछ । सामान्य आर्थिक अभाबको सम्भाबना रहेकोछ । स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । सामान्य यात्रा कारक समय रहेकोछ । शारीरिक आलस्यताले सतायनाले कार्यक्षेत्रमा ढिलाइको सामना गर्नु पर्नेछ ।
बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) आम्दानिका प्रशस्त श्रोतहरु फेला पर्नेछन । बौधिक सभा सम्मेलन जन्य कार्यमा सहभागीताको योग बन्नेछ । ब्यापार ब्यवसायमा भने समय मध्यम रहनेछ । कार्य क्षेत्रमा लगाईएको मेहेनतको उचित कदर प्राप्त हुनेछ । आफुभन्दा सानाको स्वास्थमा सामान्य समस्या देखा पर्नसक्नेछ ।
मिथुन राशि (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) स्वास्थमा सामान्य समस्या देखा पर्नेछ । परीवारजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्नहुन सक्नेछ । पुराना मित्रजनहरु सगँको भेटघाटमा समय ब्यतित रहनेछ । गरीरहेको कार्यका क्षेत्रमा मान्यजनहरुको मार्गदर्शन अबलम्वन नर्गनाले सामान्य तनाबमा फसिएला ।
कर्कट राशि (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) बल तथा पराक्रममा बृद्धिहुनेछ । नयाँ मित्रजनहरु सगँको भेटघाटमा मन प्रशन्न रहनेछ । मनोरञ्जनपुर्ण यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । नयाँकार्यको थालनि निकै उत्पादन मुलक साबित रहनेछ । अधुराकार्यहरु सन्चालन गर्न समय उत्तम रहेकोछ । पठनपाठनमा लगाईएको समय राम्रो रहनेछ ।
सिंह राशि (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) अरुको प्रशन्नताका निम्ती सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । आफन्तजनहरु सगँ सामान्य वादविवादका कारण मनमुटाब हुन सक्नेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । अरुप्रति गरीएको पुर्ण बिश्वासमा धोका हुनाले मनमा सामान्य खिन्नता बोधहुन सक्नेछ ।
कन्या राशि (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) पारीवारिक साथ सहयोग बाट कार्य क्षेत्रमा बिशेष फाईदा हुनेछ । अध्यन अध्यापनमा समय उत्तम रहनेछ । सामान्य कार्यमा अधिक समय ब्यतित हुनसक्नेछ । ब्यापार ब्यवसायको क्षेत्रबाट मनग्य लाभ उठाउन सकिएला । जिबन साथीको सहयोगमा गरीएका कार्यहरुमा सफलता हात लाग्नेछन ।
तुला राशि (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) अरुको छीटो बिश्वास गर्ने बानिको कारण तपाँईलाई सामान्य धोका हुन सक्छ । यात्र ामा साबधानि अपनाउनु पर्नेछ । सोचेको भन्दा बढिमात्रामा खर्च हुनाले मानसिक चिन्ताले सताउन सक्छ । सामान्य चोटपटकको सामना गर्नु पर्न सक्छ । गरीरहेको कार्य क्षेत्र समेत परीर्वतनको सम्भाबना रहेकोछ ।
बृश्चिक राशि (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) मित्रजनहरुको साथ सहयोगमा नयाँ कार्यको थालनि हुने योग रहेकोछ । पठनपाठनका क्षेत्रमा खर्चिएको समय निकै उत्तम साबित रहनेछ । कला कौशलका क्षेत्रमा समय ब्यतित गर्दा आम्दानि तथा मनोरञ्जन दुबै प्रशस्त प्राप्त हुनेछन । ब्यपार ब्यवसायमा नयाँ लगानि समेत उत्तम रहनेछ ।
धनु राशि (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) मान्यजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा अघिसरी कार्यप्रारम्भ नगर्नुनै उत्तम रहनेछ । गरीरहेको कार्यमा बिभिन्न कारणबश ढिलाईको सामना गर्नु पर्नेछ । भौतिक साधनको प्रयोगमा बिशेष साबधानि अपनाउनु पर्ने समय रहेकोछ ।
मकर राशि (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) नेत्रृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । अरुप्रति गरीएको पुर्ण बिश्वासमा धोका हुनाले मनमा सामान्य खिन्नता बोधहुन सक्नेछ । मनोरञ्जनपुर्ण यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । पुराना मित्रजनहरु सगँको भेटघाटमा समय ब्यतित रहनेछ । आफन्तजनहरुसगँ सामान्य वादविवादको सम्भाबना रहेकोछ ।
कुम्भ राशि (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) सामान्य चोटपटकको सामना गर्नु पर्न सक्छ । गरीरहेको कार्य क्षेत्र समेत परीर्वतनको सम्भाबना रहेकोछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । नयाँ लगानिका क्षेत्रमा बिशेष साबधानि अपनाउनु पर्नेसमय रहेकोछ । अरुप्रति गरीएको बिश्वासमा धोकाहुन सक्नेछ ।
मीन राशि (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) पारीवारिक साथसहयोग द्वारा ब्यापार ब्यवसायमा मनग्य लाभ उठाउन सकिनेछ । कार्यक्षेत्रमा लगाईएको लगनसिलताको कदर हुने योग रहेकोछ । साजेदारीकार्यका मार्फत उत्तम आम्दानी प्राप्तगर्न सकिनेछ । सभासम्मेलन जन्यकार्यमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त रहनेछ ।
Prevब्रेकिङ्ग खबर>सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु एफएममा आक्रमण
Nextरौतहटका २९ वर्षीय कोरोना संक्रमित युवकको ललितपुरमा मृत्यु
बलिउड अभिनेत्री दिव्याको निधन
खाताबाटै हरायो साढे १६ करोड
कान्ति बाल अस्पतालमा तीन बालक आइसोलेसनमा
अब म आ त्मह त्या गर्न सक्छु पुष्पा अधिकारी : भिडियो हेर्नुहोस
आजदेखि फोन गर्दा पैसा लाग्दैन ! जिरो ब्यालेन्समा फेसबुक चलाउन र युट्युब हेर्न पनि मिल्ने (83234)
दुखद समाचार ! आखिर किन गरे त पारसले आत्मा हत्या ? (27070)
अत्यन्तै दु:खद खबर : भर्खरै कोरोनाको कारण दक्षिण अफ्रिकामा नवजात शिशुको मृ’त्यु ! RIP !!!! (13118)
खुशीको खबर! बल्ल कोरना भाइरसको औषधी चीनले नै पत्ता लगायो ! (12020)
अमेरिकामा कोभिड-१९ को खोप वितरण गर्न सेना परिचालन गरिँदै (11301)
खुशीको खबर! बल्ल कोरना भाइरसको औषधी चीनले नै पत्ता लगायो ! (9704)
रमेश प्रसाईको लागि टिका सानुले गाईन् यस्तो गीत,इन्द्रेणीमा लाईभ दोहोरी गाउँदै, हेर्न नछुटाउनुस् (भिडियो)
टिकटकमा यस्तो भिडियो अपलोड गर्नाले यी युवतीलाई ३ वर्ष जे’ल र २२ लाख ज’रिवाना भयो, सचेत बनौ !(भिडियो)
हास्यकलाकार सन्तोष पन्तसंग भाइरल पुण्य गौतमको घम्सा घम्सी (भिडियो)